Lacagtii Ay Man United Ku Iibsatay Bruno Fernandes Oo La Isku Heysto & FIFA Oo Dacwad Loo Gudbiyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Lacagtii Ay Man United Ku Iibsatay Bruno Fernandes Oo La Isku Heysto...
Lacagtii Ay Man United Ku Iibsatay Bruno Fernandes Oo La Isku Heysto & FIFA Oo Dacwad Loo Gudbiyay
Heshiiskii uu Bruno Fernandes ugu wareegay Manchester United ayaa la isku heystaa iyadoo FIFA loo gudbiyay dacwad ka dhan ah kooxdiisa hore ee Sporting Lisbon.
Kooxda Talyaaniga ee Sampdoria ayaa sheeganeysa inaan weli la siinin 4 milyan ginni oo aheyd in la siiyo markii uu xiddigaan bishii Janaayo u wareegay Man United, waxayna cabashadooda u gudbiyeen ururka kubada cagta adduunka.
Sampdoria ayaa ka iibisay Fernandes kooxda Sporting sannadkii 2017 heshiis qiimihiisa uu gaarayay 7.5 milyan ginni.
Kooxda Talyaaniga ayaa sheeganeysa in heshiiskii ay ku iibiyeen ay ku jirtay sharuud aheyd inay yeelan doonaan boqolkiiba 10 faa’idada lacagta mustaqbalka lagu iibiyo xiddiga reer Portugal.
Fernandes waxaa laga iibiyay United bishii Janaayo heshiis markii hore ahaa 47 milyan ginni balse noqon kara 67 milyan ginni.
Si kastaba, kooxda Serie A ka dhisan ayaan weli helin lacagtii ay ku lahaayeen heshiiskaas.
Kooxda reer Portugal ayaa dhaqaale xumo ay heystaa sababo la xiriira fayraska dunida jahwareeriyay iyadoo bishii hore ay deyn ka waayeen bankiga Jarmalka.
Laakiin taasi wax xiriir ah lama lahan xaaladaan iyadoo Sporting ay aaminsan tahay inaysan jirin lacag ay mudan tahay Sampdoria.
Fernandes ayaa kansalay qandaraaskiisii Sporting sannad ka dib markii uu u wareegay Lisbon sababo la xiriiray mudahaad ay taageerayaasha ku sameeyeen garoonka tababarka.
Xiddigihii kale ee waqtigaas kansalay qandaraaskooda waa ay ka tageen kooxda laakiin Fernandes ayaa dib u la saxiixday Sporting kuwaasoo aaminsan in xiddiga reer Portugal uu mar labaad kooxda u saxiixay isagoo xor ah, taasoo la micno ah in kooxda Serie A heshiiskeedii hore uu sidaas ku burburay.
Previous articleUhuru, Farmajo agree to joint probe on plane crash
Next articleSheekh Shariif” Dhacdadii Bardaale waxay Khatar gelineysaa Duullimaadyada Hawada”